I-Wayland 1.19 iza nophuculo lweNvidia, amandla okongeza kunye nokususa izandiso kunye nokunye | Ubunlog
I-Wayland 1.19 iza nokuphuculwa kweNvidia, amandla okongeza kunye nokususa izandiso kunye nokunye
Emva kweenyanga ezimbalwa zophuhliso inkululeko yenkululeko Inguqulelo entsha yomthetho olandelwayo Indlela 1.19. Le nguqulo intsha 1.19 buya ngasemva iyahambelana kwinqanaba le-API kunye ne-ABI kunye neenguqulelo 1.x, kwaye ikakhulu iqulethe izilungiso zebug kunye nohlaziyo oluncinci lomgaqo.
Phakathi kweenguqu eziphambili singafumana inkqubo yokudityaniswa ephuculweyo efuna izixhobo zeMeson ubuncinci inguqulelo engu-0.52.1, iserver edityanisiweyo, ukubonelela ngekhowudi kunye neesampulu zokusebenza zokusebenzisa i-Wayland kwidesktop kunye nakwiindawo ezingaphakathi, ivela kumjikelo wophuhliso oluzimeleyo.
Utshintsho oluphambili kunye neendaba kwiWayland 1.19
Kule nguqulo intsha yewayland ii-patches zilungiselelwe i-XWayland DDX serverukuba le nkqubo inabaqhubi bepropathi I-NVIDIA, iya kuvumela ukusetyenziswa kokukhawuleziswa kwehardware kwi-OpenGL nakwiVulkan xa kusungulwa izicelo ze-X kwimeko yeWayland.
Kwakhona Abaqhubi beLungelo leNVIDIA bayaqhubeka nokuphumeza ulwandiso iyimfuneko ekusebenzeni ngokupheleleyo kwemeko-bume Esebenzisa umthetho olandelwayo waseWayland.
Enye into entsha ebonakalayo yile Uphuhliso lukaMir luyaqhubeka njengeseva edityanisiweyo yeWayland. Izixhobo zokuqinisekisa ukumiliselwa kwezicelo zeWayland kwimeko ye-Mir zenze umlinganiso ochanekileyo kwizikrini ze-HiDPI.
Yongeze amandla okulinganisa ukuphuma kwabaxhasi baseWaylandUkongeza, useto lwenqanaba elizimeleyo livumelekile kwisixhobo ngasinye sokukhupha, kubandakanya amaxabiso esikali esilinganisi.
Singayifumana loo nto yongeze amandla okongeza kunye nokususa izandiso Kwiprotocol yeWayland kunye nenkxaso eyongeziweyo yeeprotokholi zovavanyo: zwp_linux_dmabuf_unstable_v1 ukwenza wl_buffers usebenzisa indlela I-DMABUF kunye ne-wlr-Foreign-toplevel-management yokudibanisa iipaneli zesiko kunye nokutshintsha kwefestile.
Iphehlelelwe Iinguqulelo ezintsha zeSway imeko yesiko kunye neseva yomlilo yeWayfire esetyenziswa yiWayland.
Ngokumalunga notshintsho olunxulumene nokusetyenziswa kunye nemeko yedesktop, kuyakhankanywa ukuba umsebenzi uyaqhubeka kuphehlelelo lobume bomsebenzisi I-LXQt 1.0.0, eya kuphunyezwa ngenkxaso epheleleyo yomsebenzi kwiWayland.
IWayland inikwe amandla ngokungagqibekanga kwiPlasma Mobile, Sailfish 2, webOS Ushicilelo loMthombo ovulekileyo, Ulungelelwaniso kunye neAsteroidOS.
Ngelixa kwelinye icala sebenza iyaqhubeka ekuphatheni kwezicelo zeMATE zeWayland, Iliso lesibukeli somfanekiso kaMATE lilungiselelwe ukusebenza ngaphandle kokudityaniswa neX11 kwimeko yeWayland, kunye ukuphucula inkxaso yeWayland kwipaneli yeMATE Kwaye ukuba ipaneli-ye-multimonitor kunye neapplet-background applet ziye zahlengahlengiswa ukuze zisetyenziswe neWayland.
I-Fedora 34 icwangcisa ukufudusa i-KDE yokwakha i-desktop isebenzisa i-Wayland ngokungagqibekangaokanye. Iseshoni yeX11 yenzelwe ukuba ibe lukhetho. Iphakheji ye-kwin-wayland-nvidia isetyenziselwa ukuqhuba i-KDE isebenzisa abaqhubi be-NVIDIA abanini.
I-KDE isebenza ukwenza iseshoni esekwe kwiWayland ilungele ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye nokufezekisa ukulingana ekusebenzeni ngaphezulu kweX11. Imicimbi ehleliweyo ngokuphoswa kwesikrini kunye nokufakwa konqakrazo oluphakathi. Imicimbi ehleliweyo ngozinzo lweXWayland.
I-GNOME yeWayland isuse sonke isikrini ekunikezeleni xa i-dma-buf okanye i-EGLImage buffers isetyenziselwa ukuthanda uhlaziyo lwefestile, ethi ukunciphisa inani ledatha ehanjisiweyo phakathi kweGPU kunye neCPU. Idityaniswe nohlaziyo olwahlukileyo lwezixhobo zomdibaniso, oku kulungiswa kunciphise kakhulu ukusetyenziswa kwamandla xa kuqhutywa amandla ebhetri. Yongeze amandla okunika amaxabiso ohlaziyo ahlukeneyo kwiliso ngalinye.
Kwi-GTK 4, ii-API ze-GDK ziye zahlengahlengiswa kwakhona ukuze zisebenzise iProtocol yeWayland kunye neengcinga ezinxulumene noko. Imisebenzi enxulumene neX11 kunye neWayland zihanjisiwe zahlulahlula umva.
IFirefox yeWayland ibonelela ngeWebGL kunye nevidiyo ekhawulezayo ngesixhobo sehardware, ukongeza kwi yongeze umva omtsha usebenzisa indlela ye-DMABUF ukunikezela ngobume kunye nokucwangcisa ukutshintshwa kwesikhuseli ngeenkqubo ezahlukeneyo. Oku kubuyela umva kuvunyelwe ukumilisela imeko emanyeneyo ye-GL kwiFirefox eyakhayo esekwe kwiWayland, engabotshwanga kumaseva athile adityanisiweyo, njengeGNOME Mutter okanye iKDE Kwin.
Okokugqibela, kwabo banomdla wokuvavanya le nguqulo intsha, banokuzikhuphelela ikhowudi yemvelaphi yokudityaniswa kwi ukulandela ikhonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Imizobo » I-Wayland 1.19 iza nokuphuculwa kweNvidia, amandla okongeza kunye nokususa izandiso kunye nokunye
IVivaldi 3.6 ifika kunye nokuphuculwa kweethebhu, ukulayishwa okuvilaphayo kweepaneli zewebhu kunye nokunye
Ubuntu 21.04 izakuzama kwakhona ngeWayland ngokwakhona